တောင်ကိုရီးယား နှင့် မြောက်ကိုရီးယား အရေးပေါ် ဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းလိုင်းများ ပြန်လည်ထူထောင် - Xinhua News Agency
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့ရှိ သမ္မတအိမ်ပြာတော် ရှေ့မျက်နှာစာ၌ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လက တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဆိုးလ် ၊ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ နှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ(DPRK)တို့သည် တစ်နှစ်ကျော်ကြာ ပြတ်တောက်ခဲ့ရသည့် ၎င်းတို့၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများအား ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတအိမ်ပြာတော်က ဇူလိုင် ၂၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံက ၎င်းတို့၏ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းများကို ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ နာရီ(ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ၀၁၀၀)တွင် ပြန်လည်စတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အိမ်ပြာတော်က ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံထဲသို့ မြောက်ကိုရီးယားဆန့်ကျင်ရေး ဝါဒဖြန့်ချိရေး စာစောင်များ ပို့လွှတ်ခြင်းပြုလုပ်နေသည့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ရပ်တန့်ရန် တောင်ကိုရီးယား၏ ပျက်ကွက်မှုအပေါ် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများအားလုံးကို ဖြတ်တောက်ခဲ့ရာ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများအားလုံးသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇွန်လမှစ၍ ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ မွန်ဂျေအင်း နှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်းတို့သည် ဧပြီလကတည်းက အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာပေးပို့မှုများ အပြန်အလှန် ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မွန်ဂျေအင်း နှင့် ကင်ဂျုံအန်းတို့သည် ပြတ်တောက်နေသည့် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများအား ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ပထမဦးစွာ သဘောတူခဲ့ကြကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များသည် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု နှင့် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးများအား စောနိုင်သမျှ အစောဆုံး ပြန်လည်ထူထောင်ရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းသည် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေး မြှင့်တင်ရန် နှင့် တိုးတက်စေရန် အပြုသဘောဆောင်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အိမ်ပြာတော်က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
SEOUL, July 27 (Xinhua) — South Korea and the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) restored their cross-border communication lines that had been severed for overayear, the South Korean presidential Blue House said Tuesday.
The Blue House said inastatement that the two Koreas decided to resume their direct communication hotlines as of 10:00 a.m. local time (0100 GMT).
All of the inter-Korean communication lines had been severed since June last year when the DPRK cut off them in protest against Seoul’s failure to stop civic activists from sending anti-Pyongyang propaganda leaflets into the DPRK.
According to the statement, South Korean President Moon Jae-in and top DPRK leader Kim Jong Un have exchanged personal letters several times since April to communicate about issues on the restored inter-Korean relations.
The two leaders also agreed to restore mutual trust and enhance inter-Korean ties as early as possible.
The Blue House said the resumed inter-Korean communication lines would playapositive role in the improvement and the development of the inter-Korean relations. Enditem
Photo – Police officers stand guard in front of the presidential Blue House in Seoul, South Korea, March 9, 2017. (Xinhua/Liu Yun)
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကြောင့် တောင်ကိုရီးယားအား မြောက်ကိုရီးယားက ကြိမ်းမောင်းပြစ်တင်ကာ လက်တုံ့ပြန်ရန် သတိပေး